Moments Neshamwari 33
Izvo zvevamwe veChishanu yeChishanu zvinokonzera kukanganisa kana kufambira mberi mupfungwa mukushanduka kwayo here?
Nhengo munharaunda yakavanzika inodzivirira pfungwa kubva kana kuubatsira mukukudziridza kwayo maererano nemhando uye kukura kweiyo pfungwa pamwe nemhando yeChakavanzika Society icho icho mutezo. Idzi dzese dzakavanzika dzinogona kuverengerwa pasi pemisoro miviri: avo vane chinhu kudzidzisa pfungwa nemuviri nekuda kwepfungwa uye nezvekunamata, uye avo vane icho chinhu chiri mumuviri uye nekubatsira kwezvinhu. Vanhu dzimwe nguva vanozvipangira pachavo mune izvo zvinogona kutaurwa kuva rechitatu kirasi, iyo inoumbwa nemagariro ayo anodzidzisa psychic kuvandudza uye anoti kutaurirana nemweya- zvisikwa. Izvo zvinonzi zvisinganzwisisike phenomena zvinogadzirwa mumadenderedzwa adzo nepaseti. Vanotizve vanazvo uye kukwanisa kupa munhu wavanoona zvakanaka, zvakanakira muviri pane vamwe. Izvi zvese zvinofanirwa kuuya pasi pekirasi yechipiri, nekuti chinhu chavo chichave chakawoneka uye chiri chemuviri.
Nzvimbo dzakavanzika dzekirasi yekutanga vashoma kana vachienzaniswa nekirasi yechipiri; pane vashoma awa mashoma muzana vanobatsira chaizvo pfungwa mukukura kwavo pamweya. Pasi peboka iri rekutanga panosanganisirwa nzanga dzemasangano ezvitendero dzinoedza kubatsira nhengo dzadzo mukumuka mune zvomweya uye zvisingaitike- vasina zvinhu zvakadai sedzidzo yezvematongerwo enyika kana yekuraira kwemauto kana murayiridzo mune zvebhizinesi nzira - uye zvakare nemasangano ehunyanzvi hwechitendero. Avo ndevaya vechitendero chechitendero vanogona kubatsirwa nekuve venyama yakavanzika mukati mekutenda iyo kana zvinhu zveruzhinji zvisingatenderi kuti pfungwa dzichengeterwe murima uye varege kudzivirira kubva mukuwana ruzivo. Asati mumwe wechitendero chero chipi zvacho akabatana nechavanzika chechivanhu chekutenda kwake anofanira kubvunza zvinhu zvavo nenzira nemaitiro. Kune dzakawanda dzakavanzika nzanga mukati mezvimwe zvezvinamato zvikuru. Dzimwe dzenzvimbo dzakavanzika idzi dzinochengeta nhengo dzadzo mukusaziva maererano neruzivo rwehupenyu, uye vanosarura nhengo dzavo vachipokana nezvimwe kutenda. Nzvimbo dzakavanzika dzakadai dzinogona kukuvadza zvikuru kune dzimwe nhengo dzemumwe neumwe. Dzidzo yakadaro yekusarura uye kusimbisa kusaziva inogona kusimbisa, kusimbisa nekuisa pfungwa yekuti zvinoda hupenyu hwakawanda hwekurwadziwa nekusuwa kugadzirisa izvo zvisizvo izvo zvaungave zvakatungamira mukuita. Avo vane zvitendero zvechitendero chavo vega nezvechinamato, vanogona kubatsirwa nekuva nhengo yakavanzika yechinamato ichocho kana zvinhu nenzira nenzira dzese zvisangana nekutendera kweiyo pfungwa, uye chero bedzi pfungwa iyoyo iri ye kana ari kudzidziswa mune chaicho chitendero. Zvitendero zvepasirose zvinomiririra zvikoro zvakasiyana umo vamwe pfungwa dzinodzidziswa kana kudzidziswa kusimudzira mumweya. Kana munhu achinzwa kuti chinamato chinogutsa zvishuvo zveMweya zvepfungwa dzake, iye ari mukirasi yehupenyu hwemweya hunomiririrwa nechitendero icho. Kana chitendero chisingachape icho chinowanzonzi chikafu chemweya chepfungwa, kana munhu paanotanga kubvunza "chokwadi" chechinamato chake, ichi chiratidzo kuti haachisiri chake kana kuti ari kuparadzaniswa nacho . Kana mumwe asina chokwadi, kana iye asingagutsikane uye uye anotuka dzidziso dzechinamato chake pasina zvimwe zvikonzero kunze kwekusaumbwa uye kusaziva kusazvigutsa, ichi chiratidzo chekuti pfungwa yake iri kuvharwa kune chiyedza chemweya uye kukura uye kuti ari kuwira pasi pekirasi yake Hupenyu hwepamweya. Ukuwo, kana pfungwa dzichinzwa kuti chitendero chake kana chitendero maakaberekerwa chakamanikana uye chakamanikana uye kana zvisingaguti kana kupindura mibvunzo yehupenyu iyo pfungwa yake inoshuva kuziva, ichi chiratidzo kuti Pfungwa hadzivheneke uye kukura kubva mukirasi iyoyo inomiririrwa neicho chinamato uye zvinoratidza kuti pfungwa yake inoda chimwe chinhu chinozopa chepfungwa kana chikafu chemweya icho chaanoda kuti chirambe chichiwedzera.
Nzvimbo dzakavanzika dzekirasi yechipiri dzinoumbwa nemasangano aya ane zvinhu zvinowanikwa mune zvematongerwo enyika, zvemagariro, zvezvemari uye zvepamoyo zvakanakira. Pasi pekirasi iyi panouya vehukama nevemagariro akanaka, avo vakarongedzwa muchivande kupidigura hurumende, kana avo vanozvisungana pamwechete nechinangwa chekuda kuponda mhosva, kuponda kana kuita zvakaipa. Mumwe anogona kutaura zviri nyore kuti kana kwete chero cheizvi zvichabatsira kana kudzorerera kukura kwepfungwa dzake kana achiziva zvinangwa zvaro uye zvinhu.
Pfungwa yekuvanzika kuziva kana kuve nechinhu icho vamwe vasina, kana kugoverana ruzivo nevashoma. Chishuvo cheruzivo ichi chakasimba uye chinokwezva kune chisina kuvandudzwa, paudiki nepfungwa dziri kukura. Izvi zvinoratidzwa nechishuwo chekuti vanhu vanofanirwa kuve vechinhu chiri nyore uye chakaoma kupinda uye icho chichafadza kuyemurwa kana godo kana kushamisika kwevasiri. Kunyangwe vana vanofarira kuve nezvakavanzika. Musikana mudiki anopfeka ribhoni mune vhudzi rake kana muchiuno kuratidza kuti ane chakavanzika. Iye chinhu chegodo uye kuyemurwa kwevamwe vese vasikana vadiki kusvikira chakavanzika chazivikanwa, ipapo ribhoni uye chakavanzika chinorasikirwa kukosha kwayo. Ipapo mumwe musikana mudiki aine imwe ribhoni uye chakavanzika chitsva ndiye musimboti wekukwezva. Kunze kwemasangano ezvematongerwo enyika, emari uye anotyisa kana matsotsi, zvizhinji zvakavanzika zveruzhinji zvakavanzika munyika, hazvina kukosha zvakanyanya kana kuti hazvina kukosha sezvakavanzika zvemusikana mudiki. Asi avo avo vangave vakapihwa "kutamba", izvo zvinovabatsira sezakavanzika zvemusikana kwaari. Sezvo pfungwa dzichikura hazvichadi zvekuvanzika; inoona kuti avo vanoshuva chakavanzika havasati vakura, kana kuti avo kufunga nezviito vanotsvaga rima kuti vadzivire mwenje. Pfungwa inokura inoshuvira kuparadzira ruzivo kutepfenyurwa, asi iye anoziva kuti ruzivo harugone kupiwa zvakafanana kune vese. Sezvo nhangemutange inofambira mberi muzivo, kudikanwa kwenzanga dzakavanzika dzekusimudzirwa kwepfungwa kunofanira kuderera. Nzvimbo dzakavanzika hadzina kudikanwa kuti dzifambiswe mberi kwepfungwa kupfuura zera remusikana wechikoro. Kubva kumabhizinesi nemagariro uye nekuverenga zvinyorwa, hupenyu hwakajairika hune zvese zvakavanzika zvinodiwa kuti pfungwa dzigadzirise uye neapo pfungwa dzichasimudzirwa kuburikidza nematanho ehudiki. Hapana nzanga yakavanzika inogona kufambisira mberi pfungwa kupfuura kwadzo kusikwa kana kuitisa kuti ivone kuburikidza zvakavanzika zvechisimba uye kugadzirisa matambudziko ehupenyu. Masangano mashoma epachivande ari munyika anogona kubatsira pfungwa kana pfungwa dzisingazomira pamusoro pechisimba, asi zvichizopinda chaichoicho dzidziso yavo. Sangano rakadai ndiro Masonic Order. Zvakaringana vashoma pfungwa dzesangano iri vanowana zvimwe kunze kwebhizinesi kana kubatsira munharaunda. Kukosheswa chaiko kwechiratidzo uye dzidziso yetsika uye yemweya zvakangofanana kurasikirwa zvachose kwavari.
Sangano yakavanzika yechokwadi iyo inobatsira kune pfungwa mukukudziridza kwayo haina kuzivikanwa senzvimbo yakavanzika, kana kuzivikanwa pasirese. Inofanira kunge iri nyore uye yakajeka sehupenyu hwepanyama. Kupinda munharaunda yakavanzika yakadaro hakusi netsika. Ndokukura, kuburikidza nekuzvishandira kwega kwepfungwa. Inofanira kukura mukati, kwete kupinda. Hapana munhu anogona kuchengeta pfungwa kunze kwesangano rakadaro kana nekuzvishingisa iro iro pfungwa rinoramba richikura. Kana pfungwa ikakura ikava muzivo yehupenyu iyo pfungwa iyo inoyedza kubvisa kusaziva nekubvisa makore, kuvhura zvakavanzika uye nekukanda mwenje kumatambudziko ese ehupenyu uye kubatsira dzimwe pfungwa mune kwavo kwechisimba kusimudzira uye kukura. Kuve munharaunda yakavanzika hakuzobatsire pfungwa uyo anoda kukura kuti ive yayo.
Zvinoita here kuti uwane chimwe chinhu pasina? Nei vanhu vachiedza kuwana chimwe chinhu pasina? Zvinoita sei kuti vanhu vanoita sevanowana chimwe chinhu pasina, vabhadharise zvavanowana?
Wese munhu wechisikigo anonzwa kuti hapana munhu anogona kuwana chimwe chinhu pasina uye kuti chirevo chakashata uye kuyedza haina kukodzera; zvakadaro, kana iye achifunga nezvazvo maererano nechimwe chinhu che ake chishuwo, kutonga kwakanaka hakuratwi uye iye nenzeve dzinoteerera anoteerera zano uye anozvinyengedza mukutenda kuti zvinogoneka uye kuti he ungawana chimwe chinhu pasina. Hupenyu hunoda kuti kungodzoka kana account yakagadzirirwa zvese zvakagamuchirwa. Ichi chinodiwa chiri pamutemo wekudikanwa, uyo unopa kutenderera kwehupenyu, kuchengetwa kwemafomu uye kushandurwa kwemitumbi. Iye anoedza kuwana pasina chimwe chinhu chisingazombouya kwaari, chinokanganisa kutenderera kwehupenyu uye kugoverwa kwemafomu maererano nemutemo wechisikigo, uye nokudaro anozvigadzirira pachinzvimbo chemuviri wechisikigo. Iye anobhadhara mubairo, icho chisikwa pamwe nemitumbi yese-inoburitswa nemutemo inobuda uye inoitwa kuti idzore icho chaakatora kana kuti zvimwe anomanikidzwa kana kubviswa. Kana akaramba izvi achipokana kuti zvaakawana ndizvo chete zvaizove zvakauya kwaari zvakadaro, kupokana kwake kunopera nekuti kana chaakawana pasina, zvingadai zvakauya kwaari pasina kuedza kwake, saka angadai asina kuita kuedza kwaakaita kuti azviwane. Kana zvinhu zvasvika kune mumwe pasina kuedza chaiko, senge izvo zvinonzi tsaona nemukana kana nenhaka, zvinouya nekuda uye zvinoenderana nemasikirwo kushanda kunze kwemutemo, uye nenzira iyi zviri pamutemo uye zvinoenderana nemutemo. Mune zvimwe zviitiko zvese, sekugamuchira mabhenefiti epanyama uye ekuda nekushuvira chete, kana nekufunga chete, kana nekuita zvinodiwa maererano nemitsara inozivikanwa semutemo wehuwandu kana mutemo weanosarudzika, hazvibviri kuwana chimwe chinhu pasina chero mumwe anoita kunge anowana chimwe chinhu pasina. Chimwe chezvikonzero chinoita kuti vanhu vaedze kuwana chimwe chinhu pasina, ndechekuti kunyangwe ivo vachifunga kuti izvi hazvigone kuve zvechokwadi, ivo vanoona kuti vamwe vakawana izvo izvo vamwe vanoita kunge zvisiri kushandira, uye nekuti zvinotaurwa nevamwe vanhu kuti ivo vanowana zvinhu nekungovaishuvira ivo kana kuvadaidza uye nekuvazviti ivo kusvikira vava nazvo. Chimwe chikonzero ndechekuti pfungwa yemunhu haina kukwana zvakakwana uye ine ruzivo rwakakwana kuti vazive kuti haigone kuwana chimwe chinhu pasina chero chinhu chipi zvacho chakanganiswa, zvinosekesa kana zvekunyepedzera izvo zvinogona. Chimwe chikonzero ndechekuti iye anofunga kuti anogona kuwana chimwe chinhu pasina chinhu haana kuvimbika zvechokwadi. Muhupenyu hwebhizimusi rakajairika madhiri makuru ndeavo vanotenda kuti vanogona kudarika mutemo uye vanogona kuwana chimwe chinhu pasina, asi izvi imhaka yekuti ivo vanokarira kuita kuti vanhu vasanyengere pane ivo kupa zvavanoda. Saka ivo vanopa kupfuma-nekukurumidza-chirongwa kana chimwewo chirongwa uye vanonatsa vamwe sekusavimbika asi vaine ruzivo shoma pane ivo pachavo kuti vapinde mazviri. Vazhinji veavo vanoiswa muchirongwa vanowanzoratidzwa neanochemedza kuti achazowana sei zvakanakisa vamwe vanhu uye izvo zvinotsanangura kuti ivo vangapfuma sei nekukurumidza. Dai ava vaive vakatendeseka vaisazopinzwa muchirongwa asi, kuburikidza nekufarira avarice uye kuchochora mune rake dupes uye kuburikidza neyake nzira yekusavimbika, iye anoronga anowana izvo zvaanotambudza.
Vanhu vanowana chimwe chinhu vanofanirwa kubhadhara kune zvavanowana. Kana vanhu vakawana zvinhu zvinoita sekunge zvabuda mumhepo uye kuwira mumapapu avo semhedzisiro yekudaidzwa kwemutemo wehuwandu kana mudura rezvitoro kana pamutemo weopulence, kana zvisingaite, ivo vakaita kunge ipfupi- vanoona vasina nzira vanoita kutenga kwakanyanya pachikwereti, vasingafungi nezvenguva yekugadziriswa. Kunge avo vasina zviwanikwa zvavanotenga nechikwereti, idzi sanguine hasha dzinowanzowanira izvo zvavanenge vasinganyatsoda; sevaya vatengi vasina kufunga, ivo vanotsvaga "mutemo weakawanda" vanorota uye fenzi ivo vanozoita zvakawanda neizvo zvavanowana-asi ivo vanozozviona vava pedyo nekubhuroka kana nguva yekugadzirisa yasvika. Chikwereti chinogona kusabvumwa, asi mutemo unoburitsa muripo wacho kunyangwe zvakadaro. Mumwe anobvunza hutano hwepanyama uye hupfumi hwemuviri nekumhan'ara uye nekumanikidza aya kubva ku "mutemo wakawanda," kana kubva ku "mhedziso," kana chero chinhu chipi zvacho, uye anowana chimwe chinhu chezvaanoda, panzvimbo pekuzviisa zviri pamutemo mudenga. pazviri, ngaadzore zvaakange awana pamwe nemari yemhindu inotsvakwa pakushandisa.
Mumwe anogona kururamisa kusagadzikana kwemutsipa uye kudzorera muviri kune hutano nemafungiro epfungwa; asi zvichawanikwa kuti kusagadzikana kwemutsipa mune kazhinji kacho kuunzwa uye kunoenderera mberi nepfungwa dzakanetseka. Kana iyo chaiyo mafungiro yatorwa nepfungwa dambudziko rechisimba rinogadziriswa uye muviri unotangazve mabasa ayo echisikigo. Uku kurapa kuri pamutemo, kana kuti kubvisa kwechikonzero chechirwere, nekuti kurapwa kunoitika nekurapa dambudziko parinobva. Asi hazvisi zvese hosha uye hutano husina kunaka zvinokonzerwa nepfungwa inonetsekana. Hutano hwehurwere nechirwere zvinowanzounzwa nekudyiswa kwezvikafu zvisina kunaka uye kugutsikana kwechido chakashata uye zvishuwo zvisiri pamutemo. Mamiriro epanyama uye zvinhu anopihwa nekuona kuti anofanirwa kune basa reumwe, uyezve nekuzvishandira maererano nenzira dzinozivikanwa dziri pamutemo.
Izvo zvinokwanisika kukonzeresa zvirwere zvinounzwa nekudyara zvisina kufanira kuti zvinyangarika, uye zvinokwanisika kuwana mari uye zvimwe zvakanakisa mumuviri nekudaira uye zvichidzinga izvi kubva chero mazwi api anofadza pfungwa kutanga kana kutora. Izvi zvinogoneka nekuti pfungwa dzine simba rekuita pane dzimwe pfungwa uye dzinoita kuti vaunze mamiriro ezvinhu ayo yavanoda uye nekuti pfungwa ine simba uye inogona kugona kuita pane mamiriro enhau yepayo ndege, uye iyi nyaya kutendeuka kungaite kana kuunza mamiriro anodikanwa nepfungwa; zvinogoneka nekuti iyo pfungwa inogona kupa simba rayo pamusoro pemuviri uye kukonzera chirwere chepanyama kupera kwechinguva. Asi mune zvese zvinoitika apo pfungwa dzinopesana nemutemo wechisikigo kuunza mhedzisiro yemutemo mutemo unoda kuti udzorerezve, uye maitiro acho anowanzove akanyanya kukunda dambudziko rekutanga. Saka kana hutano hwakanzi uye kana izvo zvinodiwa zvemuviri zvisati zvapihwa, pfungwa dzinogona kumanikidzira kunyangarika kwekukura husina hutano, sekunge bundu Asi nekuda kweizvozvo kupora kuripwa kunodikanwa nemasikirwo ekuedza kudzivirira chaiko mitemo. Nekumanikidza kupararira kwehunhu iyo nyaya yeiyo bundu inogona kunge - sekunge vanhu vasina mutemo vakamanikidzwa kusiya zvigaro zvavo nevanochinja uye mapenzi ehupenzi - vanoendeswa kunotsvaga imwe nzvimbo yenharaunda, uko kuchawedzera kukuvadza uye kuve zvakanyanya kuoma kuwana uye kurapa. Kana chapararira nekumanikidzwa kwepfungwa bundu rinogona kunyangarika kubva kune chimwe chikamu chemuviri sebundu uye kuonekazve mune chimwe chikamu chemuviri sechironda chinosemesa kana kenza.
Kana munhu achisimbirira uye achipiwa zvinhu zvekunyama nekuzvikumbira kubva ku "mhedziso" kana "mudura remhedziso," achavawana kwenguva pfupi sekuti munhu anobheja anofarira zvaakawana. Asi mutemo unoda kuti arege kungodzosera zvaasina kuwana nokutendeka, asi kuti iye achabhadhara mari yekushandiswa kwezvaakange anazvo. Kubhadhara uku kunodaidzwa kana iye anenge achinge achinge achinge achinge achinge ashandisira chinhu chaanoda — uye chinoraswa kana achinge achinge asvika; kana kubhadharwa kungaitwe mushure mekunge awana zvimwe zvinhu ozvirasa neimwe nzira isingatarisirwe; kana kuti anogona kutora kuti atorerwe kubva kwaari kana achinge anyatsonzwa nezvavo. Masikirwo anoda kubhadharwa mumari kana kuti yakaenzana nechikwereti chakapihwa.
Kana pfungwa dzichiedza kuzviita mushandi kumuviri nenzira isiri yepamutemo, uye pfambi masimba ayo kubva mundege yayo kuenda kune yekunyama, mitemo yenyika yepfungwa inoda kuti pfungwa iyoyo inyikwe. Saka pfungwa dzinorasikirwa nesimba rayo uye imwe kana yakawanda yehungwaru hwayo yakavanzika. Kubhadharwa kunodiwa nemutemo kunoitwa kana pfungwa dzakatambura nekunyimwa simba, kutambudzika nenhamo izvo zvakakonzera vamwe mukuwana izvo zvinhu zveayo zvido, uye kana zvanetsa kuburikidza nerima repfungwa mairi, mukati maro kuedza kugadzirisa kwayo kwakashata uye kuidzosera pachezvavo sepfungwa kune yayo ndege yekuita. Vazhinji vevanhu vanoita kunge vanowana chimwe chinhu pasina chinhu havafanirwe kumirira kuti humwe hupenyu vamanikidzwa kubhadhara. Kubhadhara kunowanzo danwa uye kunongedzwa muhupenyu hwavo hwazvino. Izvi zvichawanikwa zviri zvechokwadi kana munhu akatarisa munhoroondo yevanhu vakamboedza kuwana chimwe chinhu pasina uye avo vanga varatidzika kubudirira. Ivo matsotsi epfungwa avo vanozvisarudzira ivo pachavo mumajere ezvivakwa zvavo.